प्रदुषित राजधानी : के हाम्राे मास्कले धान्ला ? कस्ताे मास्क लगाउने ?
विशेष - रिपोर्ट , समाज , स्वास्थ्य-जीवनशैली
बिक्रम थापा शनिवार, चैत्र २३, २०७५, ०८:५३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ, हामीले लगाएको मास्क कत्तिको गुणस्तर छ ? के यसले साच्चिकै धुलोलाई हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न रोक्छ ? काठमाडौँको वायु प्रदुषण अनि धुलो धूँवायुक्त वातावरण । त्यसमाथि पुराना गाडीले फ्याँक्ने विषाक्त धूवाँ त छँदै छ ।
वातावरणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिने अंगहरुको माध्यमबाट धुलोका कणहरु हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दछ । यसले स्वास्थ्यमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पार्दछ । श्वासप्रश्वास सम्बन्धि, दमको समस्या र फोक्सोको क्यान्सरलगायत रगत जम्ने, मुटु रोग, हृदयाघात, क्यान्सर रोग, मस्तिष्क घात हुने जस्ता समस्या निम्तिन सक्ने चिकित्सकहरुको दावी छ ।
प्रायः हामीले प्रदुषण तथा धुलोधूवाँबाट बच्न मुखमा गम्छना तथा रुमाल बाध्ने गर्दछौँ । मुखमा मास्क लगाउने प्रचलन यसको अवधारण हो । मास्क लगाउनुको कारण पनि धूवाँ, धुलोका कणलाई शरीर भित्र पस्न नदिनु हो । तर हामी यो भूल गर्छौँ कि मास्क लगाएकै भरमा धुलोधूवाँका कणबाट जोगियौँ । वायु प्रदुषणले हाम्रो केही बिगार्न सक्दैन । यो हाम्रो ठूलो भ्रम हो ।
चिकित्सकका अनुसार हामीले प्रयोग गर्दै आएको कपडाका मास्कले केही हदसम्म धुलोका कणहरु हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न दिँदैन । प्रदुषणको मात्रा यति धेरै छकि काठमाडौँमा वायु प्रदुषणबाट बच्न मुस्किल छ । साधारण मास्कले छेक्न नसक्ने हानीकारक प्रदुषणका कणहरु प्रत्येक साससँगै हाम्रो फोक्सोसम्म पुग्ने गरेको छ ।
काठमाडौँमा धुलो धूवाँको विगविगीसँगै अस्पतालहरूमा छाला, नाक, कान र घाँटीका बिरामीको चापसमेत बढदै गएका छन् । अर्कोतिर अहिले फुटपाथदेखि औषधि पसलसम्म मास्कको राम्रो व्यापार हुने गरेको छ । फुटपाथमा मास्कको व्यापार गर्दै आएका एक व्यापारी भन्छन्, ‘मास्कको व्यापार राम्रै हुन्छ । कपडाको र सेतो (मेडिकल) मास्क बराबर बिक्री हुने गर्छ ।’ उनले १० देखि २० रुपैयाँसम्ममा मास्कको व्यापार गर्दै आएको बताए ।
सामान्यतया भोगमास्क, मेट्रो मास्क, एन९५ र एन९९ जस्ता गुणस्तरीय मास्क लगाउँदा राम्रो मानिन्छ । यस्ता मास्कहरुले धुलोका साना कणहरु रोक्ने गर्दछ र फोक्सो सफा गर्न सहयोग गर्दछ । यसले आन्तरिक स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । मास्कको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको गुणस्तरीय मास्कले पीएम २.५ माइक्रोग्रामभन्दा कम आकारका कणहरुबाट बचाउन सक्ने बताइएको छ । जुन ठूला आकारका कणहरुको तुलनामा अधिक हानीकारक हुन्छ ।
वीर अस्पतालका प्रा डा ढुण्डीराज पौडेलले नाक, मुख प्रत्यक्षरुपमा वातावरणसँग जोडिएको हुनाले धुलोका साना कण सिधै फोक्सोसम्म पुग्ने र रगतको माध्यमबाट प्राणघातक रोगहरु निम्त्याउन सक्ने बताए । बजारमा पाइने अधिकांश सामान्य मास्कले धुलो र धूवाँका हानिकारक कण नछेक्ने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘मास्कले धुलोधूवाँका ठूला कणबाट जोगाए पनि साना कण सिधै फोक्सोमा पुग्छन् । ती साना कणले बढी हानि गर्छ ।’
मेडिकेटेड मास्कले आंशिक रुपमा धुलोधूवाँबाट सुरक्षा दिन सक्ने बताउँदै उनले भने, ‘स्वाँस फेर्नै पर्‍यो, पटक–पटक मास्क फेर्ने कुरा पनि हुँदैन’, उनले सुझाउँदै भने, ‘गुणस्तरीय तथा वैज्ञानिक खालको मास्क प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
श्वासप्रश्वासका बिरामी बढ्दै
पछिल्लो समय धुलोधूवाँ र प्रदुषणका कारण काठमाडौँमा दम, खोकीसँगै विभिन्न दीर्घ रोगको संक्रमण बढेको छ । अव्यवस्थित विकास निर्माण र मापदण्ड विपरितका सवारी साधनका धूँवाले प्रदुषण बढेसँगै रोगीको संख्या पनि बढेको हो ।
धूँवाधुलोकै कारण नाक, कान, घाँटी, फोक्सो र छालाका बिरामी बढेको वीर अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रा.डा. पौडेलले अस्पतालमा दैनिक डेढदेखि दुई सयसम्म श्वाँसप्रस्वास सम्बन्धिका विरामी उपचारका लागि आउने गरेको बताए ।
डा.पौडेले बालबालिका, वृद्ध, पुरानो दम, टीबीका रोगी, रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता कमजोर भएका विरामी बढी आउने गरेको जानकारी दिए । ‘धुलोधूवाँले विरामीमा पटक–पटक रुघाखोकी लागिरहने, पिनास हुने, घाँटी र कानको संक्रमण हुने, दम, निमोनियाँ, क्यान्सर, हृदयघात तथा अन्य गम्भीर खालका रोग निम्त्याउँछ’, उनले भने, ‘अस्पतालमा दैनिक डेढदेखि दुई सयसम्म यस्ता खालका विरामीहरु उपचारका लागि आउने गर्दछन् ।’
उनले फरक प्रशंगमा कुरा गर्दै भने, ‘मानवीय लापरवाहीले गर्दा काठमाडौँमा धुलोधूवाँ सिर्जना भएको हो । मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पुर्‍याउने प्रदुषण नियन्त्रणका लागि सरकार समयमै गम्भीर नभए यसले झन् भयावह रुप लिन सक्छ ।’
वायु प्रदुषणका कारण वार्षिक १० हजारको मृत्यु
धुलोधूवाँ जस्ता प्रदुषणका कारण नेपालमा वार्षिक दश हजारको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रदुषणबाट लाग्ने विभिन्न रोगका कारण वर्षेनी दश हजारले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । त्यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रमा पीएम २.५ को मात्रा २५ माइक्रोग्रामभन्दा बढी धुलो हुनु हुँदैन । तर काठमाडौं उपत्यकाको संगठनको मापदण्ड भन्दा पाँच गुणाले बढी भएको वातावरण विद् भुषण तुलाधारले बताउँछन् ।
तुलाधारले यसरी दिनानुदिन वातावरण प्रदुषण बढ्दै जानु जन स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । पर्यावरणलाई असर पुग्ने गरी काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेका विकास निर्माण तथा मापदण्ड विपरितका सवारी साधनका धूवाँले प्रदुषण बढेको । ‘संसारको सबैभन्दा वातावरण प्रदुषण हुने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक पर्दछ’, वातावरणविद् तुलाधारले भने, ‘वातावरण प्रदुषण व्यवस्थापनका लागि धुलाम्मे सडक तथा पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापनमा एकीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने प्रदुषणको तह पिएम २.५ को मात्रा ४० माइक्रोग्राम भन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर, वातावरण विभागको तथ्यांक अनुसार काठमाडौँमा मापदण्डभन्दा उच्च पाइएको छ । वर्षातको समयमाभन्दा हिउँदको समयमा अझै बढी वातावरण प्रदुषणको तह बढ्ने गरेको छ । विभागले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदुषण अवस्था जान्न उपत्यकाका विभिन्न ६ वटा स्थानमा वायु प्रदुषण मापक यन्त्रहरु जडान गरेको छ ।
स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ९ अर्ब लगानी बिहिवार, भदौ १९, २०७६, २१:५२:००
उपत्यकामा दशैंको चहलपहल (फोटोफिचर) शुक्रवार, आश्विन १७, २०७६, ०६:२८:००
फुटपाथ नै छैन सुरक्षित : जुनसुकै बेला विजुलीको पोलले किच्नसक्छ ! सोमवार, चैत्र ११, २०७५, १०:०२:००